न्यूजील्यान्डमा शक्तिशाली भुकम्पको धक्का,भुकम्प के हो र किन जान्छ ?
हङकङ, न्यूजील्यान्डको ला–इस्पारेन्स रकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आइतबार ६.६ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प गएको छ ।
बझाङमा भूकम्प आएलगतै फेरी जाजरकोट लाई केन्द्र बिन्दु बनाएर भूकम्प गयको जनाएको छ।
हिजो राती ९ बजेर ३२ मिनेट जाँदा कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लामा ४ दशमलब ५ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जानकारी गराएको हो ।
बझाङमा ४ रेक्टरस्केल भुकम्पको धक्का
बझाङ । जिल्लाको छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका –४ कोटदरबार नजिक केन्द्रबिन्दु बनाएर भुकम्प गएको छ । शुक्रबार दिउँसो १२ बजेर २२ मिनेटमा ४ रेक्टरस्केलको भुकम्प गएको भुकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका भुकम्प विद् दिपक बस्नेतले बताए ।
उनका अनुसार २०७२ साल बैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक लाई केन्द्र बिन्दु बनाएर गएको बिनासकारी भुकम्प पछि गएका पराकम्पन भन्दा फरक रहेको छ । यसरी पटक पटक स – सना पराकम्पन जानु भनेको महाभुकम्पको शक्ति क्षयीकरण हुनु भएकाले यसलाई राम्रो हिसावले हेर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
यसै बर्षको सुरुवातदेखि बझाङ जिल्ला लाई केन्द्रबिन्दु बनाएर तिन पटक भुकम्पका गएको भुकम्प मापन केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल मै भुकम्पको उच्च जोखिममा रहेको यस जिल्लामा गत बर्ष पनि पटक पटक गरि २७ पटक भुकम्पको केन्द्र बिन्दु बनाएको र परामम्पन महसुस भएको समेत थियो ।भुकम्पले जिल्लामा कुनै क्षति नगरेको प्रहरीले जनाएको छ । छिमेकी जिल्लाहरुमा समेत भुकम्पको धक्काको महसुस गरिएको छ ।
भुकम्प के हो र किन जान्छ ?
नेपालमा हालै गएको भूकम्प सम्बन्धि एउटा लेख प्रकाशित भएको थियो । उक्त लेखका अधिकांश तर्कहरु यथार्थपरक छन् तर लेखकले अब ८०-९० बर्षभित्र भूकम्प आउंदैन भनेर लेखेकोले पाठकहरुमा केहि भ्रम सृजना भएको छ । यसलाइ भाषागत त्रुटिका रुपमा लिइनुपर्छ । बैज्ञानिक भाषामा भन्दा उनले भनेको कुरा केबल अनुमान मात्र हो अथवा सम्भावना हो । त्यसैले यस विषयलाइ तल अझ प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएको छ ।
हिमालय क्षेत्रमा भुकम्पको कारण यसरी भारत महादिप सर्दै गइ एशियासंग ठोक्किन पुगेकाले हो । स्रोत विकिपेडिया
अप्रिल २५, २०१५ अर्थात बैशाख १२, २०७२ ११:५६ बजे (नेपाली समय) गोर्खाको बरपाक गाउंमा इपिसेन्टर भएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पको मुख्य धक्का महशुस गरियो । गोर्खामा उत्पति भएको भुकम्पका आफ्टरसकहरु दक्षिणपुर्वतर्फ सर्दै गएको देखिन्छ । जसले जमिनको धांजा दक्षिणपुर्वतर्फ फाट्दै गएको जनाउंछ । स्वभाविकरुपमा आफ्टरसकहरुको संख्या र तिव्रता घट्दै गएको छ तर यस्ता आफ्टरसकहरु एक महिनासम्म पनि जाने सम्भावना रहन्छ । यसरी आफ्टरसकहरु जांदा संचित भएको शक्ति निस्तेज हुंदै जान्छ र ठोक्किएका प्लेटहरु सन्तुलित अवस्थामा आउंदछन् । यस भूकम्पको हाइपोसेन्टर जमिनबाट करीब १५ किमि मात्र तल भएकोले प्रभावित क्षेत्रहरुमा धेरै क्षति भएको देखिन्छ । काठमान्डौ पहिले तालको पिंधमा रहेकोले यहांको माटो खुकुलो रहेको छ जसले गर्दा पनि भूकम्पको असर बढी भएको हो ।
अप्रिल २५ २०१५ को महाभूकम्प र त्यसपछिका आफ्टरसकहरुको तिव्रता र व्यापकता । स्रोत अमेरिकन जियोलोजिकल सर्भे
साना साना भुकम्पहरु बेलाबेलामा गइरहे एकैचोटी ठुलो महाभूकम्प आउने खतरा कम हुने गर्छ किनकी त्यसो हुंदा प्लेटहरु एक आपसमा घिस्रिंदा संचित भएको शक्ति थोरै थोरै गर्दै निस्तेज हुन्छ । त्यसैले पछिल्लो भूकम्पले मध्य नेपालमा अब महाभूकम्प जाने सम्भावना केहि भएपनि घटेको छ । तर युनिभर्सिटी अफ कोलोराडोका भुगर्भविद् रजर विल्हामले प्रख्यात जोर्नल साइन्समा सन् २००१ मा प्रकाशित गरेको सोधपत्रले पश्चिम नेपालमा भने महाभूकम्पको खतरा अझै पनि उत्तिकै रहेको देखाउंछ । पुर्वी नेपालमा चाहिं सन् १९३४ को भूकम्पले गर्दा त्यस्तो महाभूकम्पको सम्भावना केहि कम भएको हो । तर नेपाल प्लेटहरुको सिमानामा रहेकोले यहां पछिल्लो महाभूकम्प भन्दा पनि ठुला भूकम्प जाने सम्भावनालाइ पनि नकार्न नसकिने कुरा बैज्ञानिकहरु बताउंछन् । साना साना भूकम्पहरु त यस क्षेत्रमा बारम्बार गइ नै रहन्छन् । भुकम्पको प्रक्रिया धेरै हदसम्म बुझिएको भएपनि पृथ्वीको बनावट अत्यन्तै जटिल भएकाले यसको भविष्यवाणी गर्न निकै कठिन छ । तथ्यांकशास्त्रका आधारमा यसको सम्भावना अनुमान गरिने गर्छ जुन पहिले भएका भूकम्पहरुको गणनामा आधारित हुने भएकोले ठ्याक्कै एकिन गर्न भने सकिंदैन ।
अन्त्यमा, नेपाल लगायतका हिमाली क्षेत्रहरु टेक्टोनिकल्ली एक्टिभ अर्थात भूकम्पीय जोखिम भएका क्षेत्रहरु हुन् । त्यसैले नेपालमा भुकम्प जाने खतरा सधैं रहन्छ । भुकम्प आंफैले त्यति क्षति पुर्याउंदैन तर हामिले बनाएका कमजोर संरचनाहरु र आवश्यक पुर्वतयारीको अभावले गर्दा धेरै क्षति हुने गर्छ । हामीले अब तीन कुरामा ध्यान दियौं भने भुकम्पबाट हुने क्षतिलाइ धेरै हदसम्म न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा भवन तथा संरचनाहरु सकेसम्म हलुका तथा होचा बनाउने । दोस्रो ति संरचनाहरुको डिजाइन गर्दा लागत केहि बढी भएपनि भुकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन ध्यान दिने । र तेस्रो बिपत्ति संग जुध्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा पुर्वतयारी गर्ने ।